Ny fitsipiky ny fanabeazana avy amin'ny renin'ny zanaka valo
Ny fianakaviana lehibe dia tontolo manerantany, toy ny fanjakana madinika. Na dia miady aza ny reny manan-janaka iray ary miezaka ny mandanjalanja eo amin'ny fiainany, dia afaka maneho fahagagana eo amin'ny fitaizana, ny fandaminana ary ny filaminana ireo reny maro. Inona moa izany: endri-javatra, manokana tsiambaratelo sa marina ve fa mihamitombo hatrany hatrany ny olona iray?
Indraindray dia toa fahagagana izay ahafahan'ny ankizy samihafa amin'ny taona na taona amin'ny mora foana eo ambanin'ny tafo iray. Fa mbola mila mandamina ny fiainany, ny fialam-boly, ny tsirairay mba hihinana sy hihaino! Ny fianakaviana lehibe dia manana ny filany manokana sy ny fangatahany, ka ny reniny dia tsy afaka manao izany raha tsy misy ny fahaiza-manao sy ny fitsipi-pitondran-tena.
Na dia tsy mitovy aza ny fianakaviana rehetra, ny traikefa amin'ny fananana zanaka lehibe dia mety mahasoa na dia ho an'ireo fianakaviana manana zanaka aza. Ny mama misy ankizy valo (trano fisakanana dimy ary fianakaviana telo) - Olesya Likhunova - dia nilaza tamin'ny pejy Facebook-ny hoe ahoana ny fomba itondrany ankizy maro. Ao amin'ny fianakaviany, misy fitsipika mazava, izay tsy misy fanavahana. Io rafitra io no manampy ny Olesa mba ho tafavoaka velona amin'ny krizin'ny fahazazana.
Tsiambaratelo fanabeazana avy amin'ny reny lehibe
Ao amin'ny fianakavianay dia misy fitsipika mazava momba ny fitondran-tena (izay tsy azo atao), izay noresahana mialoha sy miasa na inona na inona ny faran'ny herinandro, fialantsasatra, ny fahatongavan'ireo vahiny, sns.
Ny sazy noho ny fanitsakitsahana ny fitsipika dia voaresaka mialoha ihany koa ary mahatratra ny fandikan-dalàna mivantana. Midika izany fa tsy mampitandrina avo zato aho (hanasazy aho, hanasazy aho amin'izao fotoana izao) - fara-fahakeliny iray.
Ny sazy dia tsy azo ovàna amin'ny fotoana hafa, manalefaka na miova. Noho izany, tsy mila mitebiteby aho, mieritreritra ny fomba hanasaziana zaza iray ary hisalasala raha tsy tezitra aho. Ny tanjoko dia ny mahita ihany fa ny fanasaziana dia manaraka ny fandikana. Tsara fanahy, tsy manam-panetren-tena ary manenina.
Toa tsotra izao izany, kanefa raha ny marina dia maro amin'ireo ray aman-dreny no tsy mahazaka io fizarana io.
Io fitsipika io dia miova tsy ampoizina ary matetika no tsy azo atao, tampoka amin'ny fitondran-tena tsara na rehefa be atao ny ray aman-dreny - dia mahazo alalana.
Izany dia ampitandremana roanjato, nefa tsy sazina.
Manasazy izy ireo nefa tsy mamarana ny farany ary mamela heloka alohan'ny fotoana na amin'ny fangoraham-po ("Okay, okay, tsapany fa sarotra ny mitarika").
Fa hamarinina amin'ny zava-misy fa tsy fahita firy ny toy izany karazana ankizy izay tsy manome ny sazy mahazatra ( "No, ny eo amin'ny seza tsy miara-mipetraka. Fotsiny izy mivoaka sy mandeha momba ny raharaham-barotra"). Noho izany, ny zaza ny ray aman-dreny fikirakirany tsy mitondra ny teny ho zava-dehibe.
Tsy afaka mandoa izany toe-javatra izany aho. Ny fahefako dia tsy tokony mahatonga ny ankizy hisalasala, raha tsy izany dia hanomboka ny korontana.
Ny ankizy tsirairay dia tokony hahafantatra fa manana olon-dehibe efa zokiny izy izay mandray fanapahan-kevitra farany, izay mahafantatra ny fomba hiarovan-tena, tony, mivantana. Avy eo dia afaka mitoetra ho zaza ny ankizy ary milalao sy mitazam-potsiny, satria ny zava-drehetra dia mifehy. Raha olon-dehibe iray - ny lehibe sy matoky tena, dia tsara ilay zaza.
Rehefa manomboka miresaka momba ny maina baiko, ny sasany dia manomboka ny mieritreritra fa manana miaramila manjaka rivo-piainana an-trano, ny ankizy mipetraka amim-pahanginana sy tahotra indray mandeha indray ny hanonona ny teny, ary ny olon-dehibe scholkayut nify. Tsy misy na inona na inona. Izany dia satria ny zava-drehetra dia mazava sy miharihary, dia hampitony ny zava-misy ao an-tokantrano. Tia ny ankizy, faly ny ray aman-dreny.
Azoko antoka ihany anefa fa ny fahazarana amin'ny fijerena fitsipika tsotra dia hijanona amin'ny zaza rehefa mihalehibe izy. Ary tsy handeha eny amin'ny arabe izy amin'ny toerana tsy mety, tsy handao sakafo maloto izy amin'ny hariva amin'ny maraina ary ho afaka hanohitra ny ampahany fahatelo amin'ny mofomamy.
Momba ny fomba hanasaziana ahy, efa nanoratra aho, fa matetika izy no manontany azy.
Ny tanora dia matetika no saziana amin'ny fipetrahana eo amin'ny seza manokana. Mijoro eo amin'ny lalantsara izy ary antsoina hoe "sazy". Ny zokiolona dia voasazy noho ny tsy fahazoana zavatra (tsindrin-tsakafo na ny fijerena tele) na ny famerana ny fahalalahana (lalao rehetra ao amin'ny efitranony / fandehanana mandalo).
Ohatra. Nitsambikina tao amin'ny boaty ny tratran'i Vadimkin i Kristina ary tsy nahazo alalana avy eo. Lazainareo fa tsy afaka ny haka ny olon-kafa ianareo, mangataka ny fitaratra aho mba hiverina any amin'ilay toerana ary handefasako an'i Chris eo amin'ny seza famaizana mandritra ny minitra 5 aho, manomboka ny timer aho. Niankohoka mafy i Kristina ary niondrika nankany amin'ny seza iray ary nipetraka teo. Mihazakazaka ny fotoana, maimaim-poana ilay zaza.
Na. Nina dia miantso hoe: "Vadim, sa tsisy dikany?". Tsy azo atao ny mandà antsika. Ao amin'ny 9 minitra eo amin'ny seza.
Na. Vadim mandalo amin'ny saka nisotro teo amin'ny vilia baolina, nanatsotra ny tanany teny an-damosiny. Azo atao ny manafina karaoty. Ao amin'ny seza ho an'ny 6 minitra.
Ny vanim-potoana amin'ny famantaranandro dia mampiseho ny isan'ny taona. Raha mikororosy eny an-joron-trano ny ankizy (manohy miondrika sy manapotipotika ireo mpitaingina), mampitandrina sy mampitombo ny fotoana aho.
Ohatra ny faharoa. Ny loholona dia milalao ao amin'ny Monopoly. Amin'ny fotoana iray, manomboka mitomany i Cyril, satria tsy mitondra izy ary very. Mampitandrina anao aho. Tezitra indray i Cyril, nikiakiaka teo am-pandrenesana fitarainana, fifandonana tamin'ny olon-drehetra, nitifitra tamin'ny lalao lalao. Mandao ny efitranony izy mandritra ny adiny iray mba hampitony azy.
Na. Nina nandritra ny ora mangina i Nina ary niondrika teo ambony lohany. Tsy voarara ny tratran'i Nina, satria eo ambany loha ny fanilihana. Telo andro tsy misy mpamoaka horonantsary (mamaky ampahany amin'ny ora mangina, ary ny antsasany faharoa dia mihaino tantara an-tsehatra).
Na. Nalemy loatra i Maria mba hanao ny entimody amin'ny teny Frantsay ary nandany ny foto-pianarany ny mpampianatra. Ny mandeha an-tongotra dia tsy mandeha amin'ny hariva.
Ohatra, tsy mitondra sakafo hariva aho raha tsy diovina ny efitrano rehefa vita ny lalao ary tsy voaomana ny latabatra.
Folo ambin'ny folo minitra alohan'ny hamoahana ireo takelaka, mampitandrina ny zokiolona sy ny zandriny aho (ireo efitra roa samihafa miaraka amin'ny lalao samihafa) izay tsy ho ela ny sakafo hariva. Ao amin'ny efitranon'ireo tovovavy, ny ankizy dia manadio ny taratasy sy ny marika rehetra avy eny amin'ny tany, manafoana ny latabatra, mametraka boky, lalao ary zavatra hafa any amin'ny toerany. Ao amin'ny efitranon'ireo ankizilahy, ny tanora dia manangona ny mpanamboatra sy ny kilalao amin'ny gorodona ao anaty boaty, dia apetraho eo amin'ny toerany ireo seza. Mijery aho raha tonga lafatra ny zava-drehetra, dia mitondra sakafo hariva aho. Raha tsy izany dia tsy hitondra izany amin'ny zavatra rehetra aho.
Na ny ohatra faharoa. Mandeha mandeha ny ankizy, raha mandidy ny mpiantafiny. Tsy misy filaminana - mijanona ianao, miara-mametraka zavatra. Imbetsaka i Galya no nijanona, avy eo dia nanomboka nanamarina ilay mpangalatra izy talohan'ny nandehanana.
Amin'ny ankapobeny, miezaka ny tsy hilefitra amin'ny tsy fahampiana aho ary mampianatra amin'ny hatsikana.
Ohatra, raha mametraka sakafo vilia eo anoloan'ny zaza iray aho, ary tsy miteny izy hoe "misaotra", dia avy hatrany dia noraisiko avy hatrany ny takelaka niverina tany an-dakozia. Mikiakiaka manaraka azy izy, "oh, eny, izaho spasibo!" - Miverina aho.
Ny ohatra faharoa. Mitondra sakafo amin'ny Vadim aho, ary manomboka mihiaka izy fa tsy te hihinana zavatra hafakely toy izany izy. Maka an-kafanam-po aho, mitondra entana mafana avy amin'ny frizera eo amin'ny takelaka aho. Vadim tsy nampoizina: "Oh, inona ity?" Izaho: "Tsy mila mafana ianao, mangatsiaka!" Vadim: "Okay, okay, te-hot!"
Ny ohatra fahatelo. Galin manokatra ny fisoloana akanjo mba scrunchy, ary jereo fa teo an-tampon'ny mpantsaka vatomamy wrappers avy amin'ny zava-mamy, ny sasany taratasy, ary maloto napkins. Tsaroako. Taorian'ny sakafo maivana ny ankizy hitondra akondro, mampahafantatra iray Christine sy hanipy ny Peel an-tampon'ny mpantsaka mpamboatra Galina: "Ny ankizy ankehitriny ao an-dakozia dia tsy voatery hanondro afaka manary fako eto! Tena tsara! ". Rehefa afaka antsasak'adiny tao anaty boaty mba efa tonga lafatra.
Ny ohatra fahefatra. Miara-misakafo aho. Mitomany i Christina fa efa noana izy ary tsy afaka miandry folo minitra. Hoy aho hoe: "Eny e, omeo!" Ary apetraho anaty takelaka kely misy pasta tsy misy kobam-bozaka ary roapolo akoho. "Ry Ugh, inona ity?" Tsy handao aho! "" Tsy afaka miandry toy ny ankizy hafa ianao, nefa tsy mbola mahandro! "" Tsia, aleoko miandry fotsiny noho ny misy. " Ary amin'ny fotoana manaraka dia manindry izy raha ho vita haingana ny sakafo ary raha vita ny sakafo.
Ny ohatra fahadimy. Raha tsy nahomby i Vadim dia nanomboka nidradradradra teny amin'ny gorodona izy, nikiakiaka, nikiakiaka ary nikiakiaka. Amin'ny ankapobeny dia mampitandrina aho fa haka ilay mpamorona, raha mbola mitohy amin'ny fanahy iray ihany. Indraindray dia averiko indray raha mitohy aho. Vao haingana aho no nilaza fa hatramin'ny kely loatra ka mangeja amin'ny tsy fahombiazany, dia manana fanafana tsara aho: sakana sy diaper. Nihomehy i Vadim saingy tsy nikiakiaka intsony. Ankehitriny, na inona na inona, miseho eo am-baravarankely aho, manofahofa diaper kely sy sangisangy, ary i Vadim dia mifoha haingana, mihomehy ary miteny hoe: "Eny ary, ny zava-drehetra, tsy misy izany!".
Mazava ho azy fa indraindray dia misy toe-javatra tsy dia marim-pototra, rehefa manaparitaka aho, manararaotra ary manazava ny antony tsy mety na tsy ilazana izany. Na dia tezitra aza aho, dia mitranga izany. Saingy ho an'ny taona lasa dia zatra izany. Afaka manisa toe-javatra toy izany ianao eo amin'ny rantsantanana. Na efa nihalehibe ny ankizy, na izy rehetra dia zatra hitazona ao anatin'ny fepetran'ny fitsipika ankatoavina.
Mihaona ny zava-drehetra, miova ny zava-drehetra, mazava ho azy, misy ny olana ara-taona any amin'ny ankizy. Fa raha mifankahita amin'ny ankizy isika, dia tsy isalasalana fa hiatrika ny zava-drehetra isika, hiaina amin'ny zavatra rehetra.